कोरोना भाइरस के हो ? - Pradesh Today
Homeविचारकोरोना भाइरस के हो ?
यतिबेला विश्वका विभिन्न देशहरूमा कोरना भाईरसको त्रास फैलिएको छ। यो भाईरसका कोरण कतिपय मानिसहरूको मृत्यु भईसकेको छ। सयौँ मानिसहरू भाईरसबाट प्रभावित छन्।
यो भाईरस चीन हुँदै अहिले अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत विभिन्न देशहरूमा फैलिएको छ। यसबाट थप क्षति नहोस् भन्नका लागि यतिबेला विभिन्न देशहरूले उच्च सर्तकता अपाउँदै आएका छन्।
कोरोना भाईरसको इतिहास
कोरोना भाईरस सन् १९६० मा पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो। यो भाईरस सबैभन्दा पहिले ब्रोन्काइटिस भाईरसबाट संक्रमित कुखुरा हुँँदै सामान्य सर्दी भएका मानिसहरूमा लागेको पाईएको हो।
जनावर हुँदै मानव स्वास्थयमा प्रत्यक्ष असर पार्ने दुई Nasal Cavities भाईरसहरूलाई पछि मानव कोरोनाभाइरस 29e र मानव कोरोनाभाइरस OC43 को नाम दिईएको थियो।
जनावरबाट सर्ने यो रोग विस्तारै महामारीको रूपमा फैलदै गएपछि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले लामो समय लगाएर यसबारे थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरे। अनुसन्धानका क्रममा स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले सन् २००३ मा ARS–COv भाइरस पत्ता लगाए।
त्यसपछि सन् २००४ मा ज्ऋइखर ल्ीटघ भाईरस पत्ता लागेको थियो। त्यस्तै सन् २००५ मा ज्प्ग्ज्ञ पत्ता लगाईएको थियो। सन् २०१२ मा HCOv/ NL63 पत्ता लगाईएको हो। सन् २०१९ मा पत्ता लागेको HKU1 भाइरसले विशेषगरी स्वासप्रश्वासलाई गम्भीर असर पार्ने गर्दछ।
वास्तवमा कोरोना भाइरस भाइरसहरूको सञ्जाल हो। जुन भाइरस सामान्य तापक्रममा बढी सक्रिय रहन्छ। यसको संक्रमणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिने गर्दछ। यो भाइरसको संक्रमणले गम्भीर श्वसन सिन्ड्रोम ( SARs ) र मध्य पूर्व श्वसन सिन्ड्रोम ( MERs) जस्ता रोगहरू लाग्ने गर्दछ।
विभिन्न समयमा पत्ता लागेका विभिन्न भाईरसहरूमध्ये सन् २०१९ मा पत्ता लागेको भाईरस अहिले चीन हुँदै विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। गम्भीर तीव्र श्वसन सिन्ड्रोम भाईरस (SARS-COV-2) का कारण लागे रोग जसलाई कोरोनाभाइरस रोग 2019 disease (COVID(2019) भनिन्छ।
विश्वमा महामारीको रूपमा विभिन्न भाइरसहरू फैलिदैँ जान थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) र युएस रोेग नियन्त्रण तथा रोकथाम (CDC) जस्ता जनस्वास्थ्य संगठनहरूले यसको अवस्थाबारे जानकारी दिदै आएका छन्। यसबाट बच्न र बचाउनका लागि विभिन्न उपचार विधिसँगै सुरक्षा सावधानीका उपायहरूसमेत बताउँदै आएका छन्।
कसरी फैलिन्छ कोरोना भाइरस ?
कारोना भाइरस स्तनधारी जनावर तथा चराचुरूङ्गीहरूबाट मानिसहरूमा सर्ने गर्दछ। यो भाइरसको संक्रमणले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग निम्त्याउने गर्दछ। श्वासप्रश्वासको समस्या हुने भएकाले यो भाइरस प्राणघातक मानिन्छ। विश्वभर यसले क्रास फैलाएको भएपनि हालसम्म यसविरूद्ध कुनै खोप वा औषधी आविष्कार भएको छैन ।
साथै कोरोना भाइरस समुद्री खानाबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणबाट सन् २०२० जनवरी ५ मा चीनमा पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। अहिले यो भाइरस चीनबाट विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको छ। यस भाइरसबाट चीनमा अध्ययनरत एकजना नेपालीलाई समेत संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ।
यो भाइरसको लक्षण संक्रमण भएको २ देखि १४ दिनसम्म देखापर्न सक्छ।
श्वासप्रश्वासमा कठिनाई हुने
यसको लक्षण कसैमा गम्भीर रूपमा देखिने गर्दछ भने कुनै व्यक्तिमा विस्तारै देखिने गर्दछ। बृद्ध तथा हुदय रोग लागेका बिरामीहरूमा यसको जोखिम बढी हुनसक्छ। जुन ईन्फ्एन्जाजस्ता अन्य श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू जस्तै मानिने गर्दछ।
खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा टाढा बस्ने वा रूमालले मुख छोप्ने।
व्यक्तिगत सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने।
रूघाखोकी लागेको व्यक्तिहरूसँग सोझो सम्पर्कमा नरहने।
यदि माथि उल्लेखित लक्षणहरू देखिएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्ने।
कोरोना भाइरसको भाइरसको वर्गिकरण
समुदाय : Group Iv((+)ssRNA)
कोरोना भाइरसका प्रजातिहरूः–
– Human coronavirus HKU1
– Human coronavirus OC43
– Human coronavirus 229E
– Rhinolophus Bat coronavirus HKU2
– Pipistrlleus bat coronavirus HKU5
– Tylonycteris bat coronavirus HKU4
– Rousettus bat coronavirus HKU9
– Bat SL-CoV-WIV1
– London1 novel Cov|2012
विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य विभागहरूले हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण परेको प्रभाव सम्वन्धी तयार पारेका वास्तविक तथ्याङ्क यसप्रकार रहेको छ। संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको संख्या ९३१४७, मृत्यु हुनेको संख्या ३२०२, उपचार गरी निको भएकाहरूको संख्या ५१७६५, प्रभावित देशहरू ८०।